Iindaba ze-PWG: URicochet uphumelele iMfazwe yaseLos Angeles ngo-2017 - Wwe
Iindaba ze-PWG: URicochet uphumelele iMfazwe yaseLos Angeles ngo-2017
URicochet ube ngoyena mntu uphumeleleyo kabini kwiPro Wrestling Guerrilla's Idabi laseLos Angeles. U-King of Flight woyise uKeith Lee noJeff Cobb kumagqibela kankqoyi, eqinisekisa ukuba yena uphumelele i-PWG World Championship.
omawukwenze xa ubanjwe ukopela
Kwimeko apho ubungazi ...
Ukuba i-NJPW G1 Climax yeyona tumente yenkulumbuso kumlo, i-BOLA ye-PWG ayinakuba semva kakhulu. Ukusasaza ngaphezulu kweentsuku ezintathu, ukhuphiswano olunye lokuphelisa luqala ngamadoda angama-24 ngaphambi kokuba whittling intsimi iye kuthi ga kwisithathu sokugqibela.
Ushicilelo lokuqala lwetonamenti lwaphumelela nguChris Bosh phaya ngo-2005, kodwa oko kukude kakhulu kumboniso wanamhlanje. Ezinye zezona zinto zibalaseleyo ziye zagqwesa kwixesha elidlulileyo, kubandakanya uKenny Omega (2008), uZack Saber Jr. (2015), uRicochet (2014), uAdam Cole (2012) no-El Generico (2011).
Ukudutyulwa kwitumente ye-PWG yeBhola ekhatywayo yimbasa elindele ukuphumelela itumente.
Idabi laseLos Angeles lowe-2017 lalinomngcelele okona kulungelelaniswe okwangoku, kunye neetalente zodidi lwehlabathi ezivela kwihlabathi liphela ezithatha inxaxheba. Intsimi ibinomxube wabakhuphisana rhoqo (uRicochet, uBrian Cage, uSami Callihan) kunye nabanye abangenayo okokuqala (iTravis Banks, iWALTER, uJoey Janela), kunye nemidlalo yokugqibela eyaba ngumxube wazo zombini.
URicochet woyise iTravis Banks ukuba aqhubele phambili ngaphambi kokuba uKeith Lee noJeff Cobb bamjoyine boyise uRey Fenix ​​kunye noMat Riddle ngokwahlukeneyo. YayinguRicochet ophume phambili, ekugqibeleni, ecofa uLee emva kokuba uBlackzilla ebethe i-Cobb yangaphambili yeOlimpiki.
Kungenxa yoko le nto ndinemicimbi yokuthemba
URicochet woyise uFlamita kunye noDesmond Xavier kumjikelo wokuqala nowesibini ngokwahlukeneyo, kodwa yena noMatt Sodal beza kufutshane kumdlalo weqela lethegi ngobusuku bobabini, bephulukana noZack Saber Jr noMarty Scurll.
Emva komdlalo, uRicochet usike isithende sokunyusa, esithi uza kuphumelela ubuNtshatsheli bePWG yeHlabathi ngaphambi kokuba aqhubele phambili 'kwizinto ezinkulu nezingcono'. Kuyaziwa ukuba le ndoda yaziwa ngokuba yiPrince Puma sele iza kuhamba eLucha Underground, kwaye iinkampani ezilwa nazo kwihlabathi liphela ziya kuba emgceni ukuze zisayine iFlorida eneminyaka engama-28.
Imali yam yayikuMat Riddle ukugoduka nendebe, kodwa kunzima ukungavumelani nesigqibo sokwenza uRicochet aphumelele amatyeli amabini okuqala kwimbali ye-BOLA. U-Chuck Taylor yintshatsheli ye-PWG yeHlabathi yangoku, kwaye u-Chucky T uthatha isithende u-Ricochet wenza umdlalo wobuntshatsheli onomdla.
phila usuku olunye ngexesha
Nokuba yeyiphi na indlela, kuvakala ngathi enye iMfazwe yaseLos Angeles emnandi ikwiincwadi.
Sithumele iingcebiso zeendaba ku-info@shoplunachics.com
uzolile xa uphambene
zendaya kunye noJacob elordi kiss
ubuyisana njani nomyeni emva komlo
Umfana akaze andibhalele kuqala kodwa uhlala ephendula
uxelele njani ubudlelwane ukuba buphelile
ubungozi bokukholisa abantu
Iindlela ezili-10 zokuthatha umhlala phantsi ujohn cena